December 9, 2020 Dai 8, 2022 0
Iyo Fitbit Charge 4 inowana GPS, Fitbit Pay uye Spotify zvinodzora uye iri nani iri nani tracker yacho
Pros Nyore kushandisaActive Zone Maminetsi anoshanda zvakanakaWaterproof kusvika 50mCons MutengoGGPS kwete iyo yakanyatsoita
Fitbit raive rekutanga zita hombe mumabasa ekuteedzera. Iyi ndiyo kambani yakashandura nhanho yekutevera kubva kuniche ichitsvaga kuita kukanganiswa kwepasirese, metric - yakawanda-kusekwa - iyo inotsigira kubudirira kweiyo fitness tekinoroji indasitiri nhasi. Asi nguva, ivo vari kuchinja-shanduka uye pane mafemu mazhinji anogadzira zvigadzirwa zveFitbit izvo zvinoita chinhu chakafanana nemari shoma.
Saka nei iwe uchigona kutenga iyo nyowani Fitbit Charge 4 pamberi pechiso chemhomho yevanokwikwidza kubva kuChina? Fitbit inofunga kuti kuwedzerwa kweGPS uye kusarudzwa kwezvimwe zvinhu zvakakwana kunyengetedza vatengi kure nebhara rekutenga. Tinofanira kutaura kuti tinobvumirana.
Fitbit Charge 4 ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Iyo Fitbit Charge 4 inotevera maitiro akagadzwa nekambani mumakore mashoma apfuura, mukuti haina kutaridzika zvese zvakasiyana nemuenzaniso wainotsiva - Fitbit Charge 3, iyo yakatangwa muna Gumiguru 2018. Kana zvasvika kune maficha, zvisinei, pane kukwidziridzwa uye iwo akakosha.
Nhau hombe dzakavakirwa-mukati GPS uye izvi zvinoita kuti ive yekutanga yeFitbit's fitness bhendi kuve nehunyanzvi. Iyo yega yega yazvino Fitbit inopfekwa neGPS ndeye kuchembera Fitbit Ionic smartwatch; kana yeiyo femu inodhura kwazvo Versa uye Versa Lite mawachi haina, kana iyo inobuda Fitbit Charge 3 kana chero yeanodhura emitezo yekutevera.
Iyo Fitbit Charge 4 inowedzerawo Fitbit Pay, chinhu chaimbove chiripo kare paFitbit Charge 3 Special Edition, inouya nekwaniso yekudzora Spotify kutamba uye inowedzera nzira nyowani yekutevera kukodzera kwako: Active Zone Maminetsi, zvimwe pazasi pazasi.
Fitbit Kubhadharisa 4 Yepamberi Fitness Tracker neGPS, Kushambira Kutevera & Kusvika Kune Mazuva manomwe Bhatiri, Nhema
£ 126.88 Tenga izvozvi
Fitbit Charge 4 Fitness uye Chiitiko Tracker ine Yakavakirwa-mukati GPS, Moyo Rate, Kurara & Kutamba Kutevera, Dema / Dema, Imwe Saizi (S & L Mabhendi Akabatanidzwa)
$139.99 Tenga izvozvi
Fitbit Charge 4 ongororo: Mutengo nemakwikwi
Saka ndezvipi zvimwe zviripo pamutengo unobvunza weFitbit Charge 4 we £ 130? Zvinoitika pane zvakawanda chaizvo. Kana iri bhandi-rekutevera-wristband ine GPS yauri kutevera, une iyo Huawei Band 3 Pro kana iyo Huawei Band 4 Pro yekusarudza kubva, zvese pamitengo isingasviki hafu yeiyo Fitbit Charge 4. Garmin's Vivosport bhendi (£ 100) inodhura zvakanyanya kupfuura iyo Charge 4, kunyangwe zvakakosha kuti uzive kuti haina kugona kushambira kwekutevera kwaFitbit uye ine diki, fiddlier kuratidza.
Kana iwe usina hanya nekutarisa smartwatch futi, pane zvimwe sarudzo zvaunogona kuwana kwauri. Iyo inoshamisira yakanaka-kukosha Amazfit Verge uye Verge Lite vese vane GPS uye vanotanga nemutengo we £ 75; iyo Kudza MagicWatch 2 mune yayo 42mm guise inogona kuve ye £ 120. Iyo Fitbit Charge 4, saka, iri kumagumo ekumusoro emutengo chiyero chechigadzirwa cherudzi urwu.
Fitbit Charge 4 ongororo: Zvikuru maficha uye dhizaini
Kuti usimbise zvakare, hapana chitsama chikurusa chitsva pane dhizaini kumberi neFitbit Charge 4. Sezvakamboita, ibhendi yekusimbisa ine inline inoratidzira - kwete yakatsetseka seFitbit Inokurudzira HR asi zvirokwazvo yakawanda kupfuura iyo Ndima 2 kana Versa Lite wachi.
Chokwadi, saizi, chimiro uye dhizaini zvakaenzana neCharge 3. Muviri wakajairika wakakombama une bata-bata kuratidza, ma sensors ari kumashure uye ne "capacitive" bhatani padivi iro rinoita sekudzora kumashure / kumbomira. Kune rimwe divi, izvi tad zvinofinha; kune rimwe racho, zvinoreva huripo Charge 3 accessories uye mawristbands anoramba achienderana nechinhu chitsva. Uyezve, ini ndinofunga Charge ichiri imwe yeanokwezva wristband trackers kunze uko; zvirokwazvo zviri nani kutaridzika kupfuura iyo Garmin Vivosport.
Iyo Charge 4 ichine monochrome OLED yekubata skrini, zvakare, zvinoodza moyo kana vese Versa neIonic vaine mavara ekuratidzira. Izvi zvinogona kuve zvinonyengera kuverenga muzuva rakajeka, kunyange zviri nyore kwazvo kuona mune mamwe mamiriro, uye kufamba, pane kuratidzwa kune mamwe mawristband mabhande andakashandisa.
Iyo chishandiso zvakare inochengetedza ese mafirita ekuteedzera maficha kubva kuCharge 3 uku uchiwedzera zvimwe zvitsva futi.
Unogona kuishandisa kuteedzera kurova kwemoyo wako, nhanho, macalorie akapiswa, kurara uye pasi kukwira. Kune otomatiki kurovedza muviri, pamwe nema modes ekumhanya, kuchovha bhasikoro, treadmill, "kunze kwekudzidzira" uye kufamba. Iyo Fitbit Charge 4's 50m yekudzivirira kwemvura zvinoreva kuti iwe unogona kuishandisa kushambira yekutevera, futi.
Pakati pezvinhu zvitsva, Fitbit yakawedzera Spotify zvinodzora (haugone kurodha matraki kubhendi pachayo, zvisinei) uye Fitbit Pay. Pakutanga, iyo yekupedzisira ficha yaive yakaganhurirwa kune Special Edition modhi. Kwete kuti ino ichave nzvimbo hombe yekutengesa muUK sezvo huwandu hwemabhangi anotsigira Fitbit Pay ari kuderera zvisingaite kana ichienzaniswa neGoogle neApple zvakaenzana masystem.
Ichaongorora huwandu hweropa rako reoksijeni paunenge uchirara, futi, uye pekupedzisira asi zvisingaite zvirinani kutaura nezve chokwadi chekuti Fitbit iri kupa zvinhu makumi mana zvezvinhu zveprimiyamu muapp mukutsigira vashandisi panguva ye COVID-40 denda. Izvi zvinogona kuwanikwa pasi peiyo Tsvaga tebhu muapp uye zvakanyanya kutora fomu revhidhiyo kurovedzwa.
Kune zvakare yakawedzerwa 90-mazuva emahara kuyedzwa kweFitbit's £ 8 / mth Premium sevhisi, iyo inoburitsa zvese kubva kuzvirongwa zvakatungamirwa zvemuviri uye humwe hutano hwehukama "ruzivo" kune epamberi yekurara-yekutevera maturusi uye zviuru zvekuwedzera kushanda.
$148.99 Tenga izvozvi
Fitbit Charge 4 ongororo: Ndeapi Anoshanda Nzvimbo Maminiti?
Asi Fitbit haina kumira ipapo uye, mukufamba kunenge kwakanyanya kukosha kupfuura kuvandudzwa kwehardware, yasarudza iyo Charge 4 kuvhura yayo nyowani Active Zone Maminiti ezvehutano metric, iyo inowonekera padanho nhanho yako kuverenga, macalorie akatsva, chinhambwe uye uriri hwakakwira huwandu pane iyo yakakosha skrini yeFitbit.
Izvo zvinoshanda zvishoma senge mamwe ma metric mune izvo izvo zvaunoita zvinowedzera kumusoro nekufamba kwenguva. Panzvimbo pematanho, zvakadaro, vashandisi vanopihwa zuva nezuva uye vhiki nevhiki zvinangwa zvekutora nguva yakareba sei mune yakapihwa chiyero chemwoyo. Iko kusarudzika maminetsi makumi maviri nemaviri zuva nezuva uye nemaminitsi zana nemakumi mashanu pasvondo. Zone maminetsi anopihwa mibairo zvakasiyana, zvinoenderana nenzvimbo yavanopedzera iwo maminetsi.
Ita zvinyoronyoro, gumi-maminetsi ekurovedza muviri zvakanyanya munzvimbo yako ine mafuta-inopisa moyo-chiyero zone (nzvimbo 3, kazhinji), semuenzaniso, uye iwe unozowana gumi Anoshanda Nzvimbo Maminetsi kune yako yezuva nezuva maminetsi makumi matatu tarisiro; kukwira kwakasimba kune yako cardio uye yepamusoro yemoyo nzvimbo dzenzvimbo (dzinowanzo tsanangurwa senge nzvimbo ina neshanu) uye iwe unowana mbiri mbiri kiredhiti kune chero nguva yakashandiswa munzvimbo idzodzo.
Kuchengeta yako kugwinya uchishandisa moyo-chiyero nzvimbo haina chinhu chitsva. Ndo izvo zvakakomba zvevatambi uye vane hutano hwevanyengeri vanga vachiita kubva ipapo tekinoroji yekuyera kurova kwemoyo yakave yakawanika zvakanyanya. Nekudaro, kuverenga iyo "nguva in zone" yakanangana nechinangwa chezuva nezuva kana svondo nenzira imwecheteyo sekuverenga nhanho ipfungwa nyowani uye inotaridzika kunge ine hungwaru. Izvo zvine musoro zvinonzwisisika kubva kune yakajairika mamiriro ehutano kupfuura iyo yakawanda inopokana nhanho kuverenga chiyero.
Izvo chete zvinhu zvandaizove nehanya nazvo ndezvekuti, chekutanga, Active Zone Maminiti sechirevo zvakanyanya kushomeka kunzwisisa kupfuura nhanho kuverenga. Uye, chechipiri, kuti iyo yekuwedzera nguva kiredhiti yezviitiko mune yako cardio uye epamusoro matunhu anogona kukurudzira vanhu kuti vazvipinze zvakawandisa zvakanyanya-zvakanyanya kurovedza muviri vachibhadharisa yakaderera kudzika kurovedza muviri kana muyero pakati pezviviri ndizvo zvaunoda kuvavarira.
Fitbit Charge 4 ongororo: Performance
Chinhu chikuru chikuru, zvisinei, ndiko kuwedzerwa kweGPS saka zvakakodzera kuti uongorore mashandisiro azvo. Mhinduro yekukurumidza kumubvunzo uyu yakwana zvakakwana, asi iri nzira refu kubva kune yakanakisa yekutevera GPS inopfeka yatakaedza pano paNyanzvi Ongororo.
Ini ndaishandisa iyo Fitbit Charge 4 yekutarisa akati wandei kumhanya uye mafupi mafambiro mukati memazuva mashanu. Chinhu chimwe chete chisingachinji chandakaona kuti nzira yakarongwa pamepu yaiita kunge inodakadza. Iyo haina kumbundira makona kunyanya mushe uye ichifananidzwa zvisina kunyatsoenderana neiyo yakachembera Garmin Forerunner 630 yandaive nayo pane yangu imwe ruoko, uye izvi, paavhareji, zvakatungamira kune mashoma marefu marefu kurekodwa. Kwete nekukwana kuti usanyanye kunetseka nezvazvo, asi kana uchimhanya madaro marefu e10km pamwe ungangoda kutarisa chimwe chinhu chakanyatsojeka.
Heino muenzaniso - cherekedza chikamu chepamusoro chetraiki, uko iyo Fitbit inotenderedza iyo ichinyatso kuoneka:
Asi ipapo, iyi haisi yakakomba kumhanya wachi; ndeyekugwinyisa muviri uye sekureba sekuramba uchizvishandisa zvinokupa chiyero chakanakira maitiro auri kuita uchienzanisa.
Yekucheresa yemoyo yekutarisa inonyanya kufadza. Zvichienzaniswa nedata rakaunganidzwa kubva pawachi yambotaurwa neGarmin HRM-Run chipfuva chakabatanidzwa, iyo Fitbit yakateedzera padhuze. Zvekare, yaida kuverenga zvakanyanya zvishoma kupfuura iyo Garmin asi kwete nezvakawanda. Chokwadi, pamusoro pekumhanya kushoma kubva pamaminetsi makumi maviri nemaviri kusvika kumaminetsi makumi mana nemasere pakureba, mutsauko wepakati wepakati wekurova kwemoyo kwaive kutenderera 22bpm.
Sezvauri kuona kubva pamuenzaniso uri pazasi, moyo-chiyero chinoteedzana chinowirirana zvakanyanya, kunyangwe zvisingaite, pakumhanya uku, iyo Fitbit yakanyora yakaderera avhareji yekurova kwemoyo uye yakaenzana neiyo max moyo rate chaizvo
Chekupedzisira, kune hupenyu hwebhatiri, iyo inotorwa pamazuva manomwe isina GPS uye maawa mashanu ekuenderera mberi kwekushandisa GPS. Chiitiko changu kusvika parizvino ndechekuti kushandisa GPS kwekupfupisa kwechiitiko (maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu) zuva rega rega rinopa mazuva mana ekushandisa. Izvo zvakanaka mubhuku rangu.
VERENGA NEXT: Iwo akanyanya akasimba mateki ekutenga nhasi
Fitbit Charge 4 ongororo: Mutongo
Iyo Fitbit Charge 4 haitaridzike senge hombe kuvandudza kunze, asi GPS ndeyekugamuchirwa kuwedzera uye zvakanaka kuona Fitbit ichienderera mberi nekuvandudza nekuunzwa kweAlex Zone Maminetsi - inonakidza nyowani kutora pane iripo nzira yekutevera kurovedza muviri. kusimba nekufamba kwenguva. Zvakanaka chaizvo kupiwa mubairo wekuoma kwaunoita iko kurovera pane kungoita matanho mangani aunotora kana kuti nguva yakareba sei yaunoshanda.
Mubvunzo unorema kupindura ndewokuti iyo Fitbit Charge 4 yakakodzera kubhadhara iyo yekuwedzera, uchipiwa kuti vamwe vateveri vanowanikwa neakafanana maficha pane zvishoma zvishoma. Ndingati zvave kungokosha, kunyanya nekuti Fitbit ine nharaunda yakakura kudaro - uye zvishoma nekuti Charge 4 zvakare inokanda mukushambira kuteedzera pamwe neayo mamwe masimba. Zvinonakidza kugona kushamwaridzana neshamwari kurudziro iwe uchiedza kuramba wakakwana.
Nekudaro, kana izvo zvikasafadza, uye zvese zvaunoda ndeyekuti mudziyo utaure kwauri kwawanga uri, kuti kurova kwemoyo wako kwaive kupi uye matanho mangani awakatora, ipapo unogona kuwana yakafanana ficha yakatarwa ye mari shoma shoma.
Fitbit Charge 4 zvirevo
Screen Monochrome OLED inobata skrini ine auto-kupenya
Mamhanyiro emoyo Ehe
Mvura-inodzivirira 50m (5ATM)
Core yekutevera Matanho, macalorie, kurara, pasi pakwira, kurovedza muviri, kushambira
mumhanzi Spotify kutonga (hapana kurodha pasi)
Kubhadhara kweNFC Fitbit Pay
Battery upenyu Mazuva manomwe asina GPS; 7hrs nekuenderera kwekushandisa GPS